Zvikwata izvi zviri kudzoka zviri maoko chete mushure mekurohwa mumitambo yavo kunyange hazvo vaive vasimuka muHarare vachivimbisa mafaro.
MaSables ndiwo akatanga kurohwa apo vakadamburwa 31-26 neMugovera mumakwikwi e 2017 Africa Gold Cup Group 1A ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma 2019 Rugby World Cup ayo achaitirwa kuJapan.
Chiri kunyayorwadza mukurohwa uku ndechekuti maSables aive akatungamira 23-7 apo zvikwata izvi zvakaenda kuzoro, asi vakazokudubuka zvinotyisa zvikwata izvi zvadzoka kubva kuzororo.
Kukundwa uku kwasiya mubvunzo kuti maSables achakwanisa zvekare here kubudirira kuenda kuma fainari eWorld Cup mushure mekupedzisira kuita izvi muna 1991 apo vakanokwikiwidza kumakundano akaitwa akati fararira kuEngland, Wales, France, Ireland, ne Scotland.
MaSables anofanira kukunda mumutambo wavo unotevera uyo vari kusangana neKenya svondo rino kuti maroto avo ekutora mukombe uyu uyezve ekuenda kuWorld Cup arambe aripo.
Zvakamira zvakadai, mavanga ekurohwa kwemaSables asati apera, maWarriors akatevera izvi nekuwisirwa pasi 1-0 nemaBrave Warriors mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda kuma 2018 Africa Nations Championships nechibodzwa chakabva kuna Henrik Somaeb kwafamba maminitsi makumi mashanu nerimwe chete.
Asi Zimbabwe ichiri nemukana wekudzorera zvayakaitwa neSvondo apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium svondo rino mumutambo ucharatidza chikwata chichaenderera mberi nemakundano aya.
Vanotevera mutambo uyu havasi kunyanyotya zvavo nezvakaitika muSam Nujoma Stadium mumwe wavo ari mutsigiri weCaps United, VaInnocent Mutena, avo vanoti maWarriors achakunda mumutambo unotevera.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association, VaMarkabee Makamure, vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekurohwa kwakaitwa maWarriors asi vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti chikwata chaSunday Chidzambwa ichi chichakunda apo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare.
MaWarriors ari kutarisira kupa mufaro kuvateveri venhabvu sezvavakaita svondo rapera apo vakatora mukombe weCosafa Castle Cup mushure mekurova Mozambique, Seychelles, Swaziland. Lesotho, neZambia.
Pamusoro pezvo, chikwata ichi hachisi kuda kuita maWarriors ekutanga kukundikana kuenda kuma fainari eAfrica Nations Championships kubvira makundano aya akavambwa muna 2009.